'सत्तामा भए पनि महत्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दामा सहभागी छैनौं' | Nagarik News - Nepal Republic Media
'सत्तामा भए पनि महत्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दामा सहभागी छैनौं'
१६ माघ २०७३ ११ मिनेट पाठ
पाका राजनीतिज्ञ डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले चक्रीय प्रणालीअनुसार गत बुधबार राप्रपाको राष्ट्रिय अध्यक्ष जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । तीन सातापछि महाधिवेशनमा जान लागेको पार्टीको आगामी रणनीति, सरकारका काम र समसामयिक राजनीतिबारे नागरिकका लागि मणि दाहालले गरेको कुराकानीः
चुनाव हुने वा नहुने विषय छ । संविधान संशोधनको कुरा पनि छ । भोलि के हुन्छ भन्ने अन्योलको अवस्था छ । यो अवस्थालाई कसरी लिनुभएको छ ?
देश उज्यालोभन्दा अँध्यारोतर्फ गइरहेको छ । अँध्यारोका दुईतीन विषय हुन्छन् । मानिसले टाढाको विषय देख्दै देख्दैन, नजिक पनि त्यति राम्रो देख्दैन । अघि बढिहाल्यो भने पनि कि कसैलाई ठक्कर दिन्छ वा कि खाल्टामा पर्छ । अहिले देशको अवस्था त्यस्तै छ । १५ दिनपछि यो देशको अवस्था के हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । केपी ओलीजी सरकार २० दिनमा ढल्छ भनिरहनुभएको छ, देउवाजी कोट र जुत्ता लगाएर मेरो पालो कहिले आउँछ भनेर बस्नुभएको छ, प्रचण्डजीको केही समय थप्न पाए हुन्थ्यो भन्ने दाउ छ । यी तीन नेताको स्वार्थका कारण नेपाल खाल्टो पर्ने हो कि यहाँ विदेशीको प्रभाव बढ्दै जाने हो भन्ने चिन्ता सबैमा छ ।
तीनै ठूला दल महत्वपूर्ण र दूरगामी राष्ट्रिय विषयमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ । अहिलेको प्रक्रियामा तीनवटै दलले राप्रपालाई सहभागी गराएका छैनन् । त्यसैले सरकारका कतिपय निर्णयमा हाम्रो नैतिक दायित्व हुँदैन ।
यसको समाधान कसरी हुन्छ त ?
तीनै ठूला दल महŒवपूर्ण र दूरगामी राष्ट्रिय विषयमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ । अहिलेको प्रक्रियामा तीनवटै दलले राप्रपालाई सहभागी गराएका छैनन् । हाम्रो दल सत्तामा छ तर महŒवपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दमा सहभागी छैन । त्यसैले सरकारका कतिपय निर्णयमा हाम्रो नैतिक दायित्व हुँदैन । साझेदारी नभएपछि सत्तामा किन बसिरहने भनेर हाम्रो पार्टीमा छलफल हुन थालेको छ ।
तीन ठूला दलले महŒवपूर्ण विषयमा एकै प्रकारको अडान लिनुप¥यो । देशलाई विखण्डन गर्ने खुलेआम नारा आइरहेका छन् । त्यो नेपालको कानुनअनुसार मिल्छ कि मिल्दैन ? यस्तो गर्न पाइँदैन । यसमा सबै दल एक हुनुपर्छ । ‘जनताले देखाइदिन्छन्’ भन्ने हो देशमा कानुन किन चाहियो ? बिजुलीका चोरहरू पक्राउ परेका छन् । उनीहरूलाई किन कानुनअनुसार समात्नुप¥यो । जनताले हेरिहाल्छन् नि । चोर्न दिने, जनताले देखाउँछन् भनेर बसे भइहाल्यो नि । सरकारले कानुनबमोजिम गरेको कामलाई अन्य दलले पनि समर्थन गर्नुप¥यो । केही आधारभूत विषयमा सबै दलको एउटै धारणा हुनुपर्छ ।
सविधान कार्यान्वयन गर्न अहिलेको प्राथमिकता स्थानीय, प्रदेश र संसद्को चुनाव हो । चुनाव गराउने विषयमा सबै दल एक हुनुप¥यो । सबै दल चुनावमा जानुप¥यो । मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलका कुरा सुन्नुप¥यो । मधेसमा निस्केको आवाज त्यहाँको मात्र होइन, सबैको हो । त्यहाँको समस्या सबै नेपालीको समस्या हो भन्ने स्वीकारेर मधेस केन्द्रित दलहरूलाई मिलाएर लैजानुप¥यो ।
मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न संशोधन प्रस्ताव पारित गरे हुँदैन ?
सरकारमा सहभागी भए पनि यसमा हाम्रो दलको समर्थन छैन । मुलुकको राज्य व्यवस्थामा मधेसका जनताको समानुपातिक सहभागिता हुनुपर्छ भन्नेमा हामी सबै एकमत छौं । राप्रपाको यसमा पूर्ण समर्थन छ । समावेशी र समानुपातिक आधारमा चुनाव गरिनुपर्छ, राज्य सत्तामा विभिन्न समूहका जनसंख्याको अनुपातमा हुनुपर्छ भनेर राप्रपाले २०५६ सालदेखि आवाज उठाउँदै आएको छ । अहिले विवाद मिलाउन मधेसका जिल्ला पहाडका जिल्लासँग मिलाउनै हुँदैन भन्न खोजिएको छ त्यसमा हाम्रो सहमति छैन ।
रदेश नम्बर ५ मा मधेस र पहाडमा बस्ने दुवैले छुट्ट्याउनुपर्छ भनेका छैनन् । एकजुट हुनुप¥यो भनेर लाखौंले जुलुस निकालेका छन् ।
एक वर्षअघि त्यही प्रदेशको निर्माण नेपालको हितका लागि भएको थियो भने अहिले फोड्नुपर्ने आवश्यकता किन प¥यो ? सीमांकनको प्रस्ताव देशको हितमा छैन भन्ने राप्रपालाई लागेको छ ।
नागरिकताका विषयमा पनि बिहे गरेर ल्याउनेबित्तिकै नेपाली नागरिक हुने व्यवस्था नेपालजस्तो सानो देशका लागि उपयुक्त छैन । नेपालको चेली विवाह गरेर भारत गइन् भने सात वर्ष कुर्नुपर्छ । यो विषय परिमार्जन हुनुपर्छ । सबै मिलेर छलफल गरौं तर देशलाई चुनावमा लैजाऔं ।
सरकारमा भए पनि महŒवपूर्ण निर्णयमा ठूला दलसँग परामर्श नभएको बताउनुभयो । त्यसो भए सरकारमा राप्रपाको उपस्थित किन ?
सरकारमा हाम्रो उपस्थिति छ तर महŒवपूर्ण निर्णयमा हामी सामेल छैनौं । यसबारे पार्टी अध्यक्ष कमल थापाजी र वरिष्ठ नेता पशुपतिशमशेर राणाजीले पनि कुरा उठाइरहनुभएको छ । तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीले वास्ता गरिरहनुभएको छैन । सरकारमा रहिरहनुको औचित्यका बारेमा पार्टी कार्य सम्पादन समितिमा प्रश्न उठेको छ ।
पार्टी अध्यक्ष कमल थापा सरकारमा जाने समाचार आएका छन् । त्यो गलत हो त ?
कमलजीले मसँग त्यस्तो नभएको बताउनुभएको छ ।
सरकारका बारेमा कहिलेसम्म निर्णय गर्नुहुन्छ ?
आगामी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठकमा यस विषयमा केही हुन सक्छ ।
भर्खर राप्रपाको राष्ट्रिय अध्यक्ष हुनुभएको छ । पार्टीको महाधिवेशन पनि आउँदैछ । अब पार्टी कसरी अघि बढ्छ ?
महाधिवेशनका लागि अहिले नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने काम भइरहेको छ । विभिन्न व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएर काम अघि बढेको छ । पार्टीको नेतृत्व छनोट महाधिवेशबाट गर्ने हो ।
महाधिवेशनमा अध्यक्षका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ कि गुर्न हुन्न ?
अहिले देशभर पार्टी संगठनभित्र चुनाव भइरहेको छ । त्यसमा हामीले ध्यान दिएका छौं । नेतृत्वका लागि कसरी जाने भन्ने विषयमा साथीभाइसँग छलफल गरेर अघि बढ्छु । कार्यकर्ताबाट नेतृत्वमा जानका लागि चर्को दबाब छ । तर मेरो प्रयास सकेसम्म सर्वसम्मत गराउने हुनेछ ।
प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुपरेमा कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ? कुन मुद्दा उठाउनुहुन्छ ?
कार्यकर्ताको आवाज सम्बोधन हुने गरी निर्णय गर्नेछु । प्रतिस्पर्धामा गएँ भने पार्टीलाई विधान, विधि र नियमअनुसार चलाउने एजेन्डा बनाउँछु ।
राप्रपा र राप्रपा नेपालबीच एकीकरण हुँदा हिन्दु धर्मबाहेकका विषय महाधिवेशनका लागि थाती राखिएको छ । केहीले गणतन्त्र स्वीकारिसकेका छन् र केहीले संवैधानिक राजतन्त्रकै कुरा उठाउँदै आएका छन् । यस विषयमा अब पार्टीले कस्तो धारणा बनाउँछ ?
राप्रपा राष्ट्रवादी दल हो । हाम्रो पार्टी पुरानो कुरा नछाडी २१ औं शताब्दीका लागि चाहिने सिद्धान्त र मान्यतालाई फ्युजन गरेर लैजाने दर्शनका आधारमा अघि बढ्छ । हिन्दु धर्मका बारेमा हामीभित्र कुनै विवाद छैन । सबै धर्मलाई सम्मान गर्दछौं हामी । पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहित सर्वधर्म
सापेक्ष हिन्दु राष्ट्रको परिचय हो । गणतन्त्रमा आइसकेका छौं । विगत ८–१० वर्षको गतिविधि हेर्दा निष्कृय रहे पनि राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा राजसंस्था हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेका छन् । जसले हिमाल, पहाड र तराईलाई भावनात्मक एकताको सूत्रमा बाँध्छ भन्ने धारणा पनि छ । यस विषयमा पार्टीभित्र व्यापक छलफल गर्नेछौं । अहिले विभिन्न समिति बनाएर छलफल चलिरहेको छ ।
प्रकाशित: १६ माघ २०७३ ०८:०६ आइतबार
सत्तामा भए राष्ट्रिय मुद्दामा सहभागी छैनौं